ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ ​ထုတ်​ပြန်​ချက် စာအမှတ် ( ၈၊ ၂၀၁၆ )
​နိုဝင်ဘာ​လ ၊ ၂၉ ၊ ၂၀၁၆။
​အောက်​တို​ဘာ​လ ၂၀၁၆ ​အ​တွင်း ​အ​စိုး​ရ​တပ် ​မ​တော် ​က ​မိုင်း​ရှူး၊ ​သီ​ပေါ ​နှင့် ​နောင်​ချို​တွင် ​ရှိ SSPP/SSA ​ကို​ထို​စစ်​ဆင်​တိုက်​ခိုက်​ရာ​မှ ​ရွာ​သူ​ရွာ​သား​များ​ကို ​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့​ပစ်​သတ်​ခြင်း၊ ​စိတ်​ရှိ​တိုင်း​ဖမ်း​ဆီး​ခြင်း​နှင့် ​ပ​စ္စည်း​များ​လု​ယက်​ခြင်း​များ​ပြု​လုပ်​ခဲ့​သည်။
​ ရှမ်း​ပြည်​တိုး​တက်​ရေး​ပါ​တီ ​ရှမ်း​ပြည်​တပ်​မ​တော် SSPP/SSA ​ကို ​အောက်​တို​ဘာ​လ ၂၀၁၆ ​တွင် ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​မှ ​ထို​စစ်​ဆင်​ပြု​လုပ်​နေ​ချိန်​အ​တွင်း ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား​များ​က ​ရွာ​သား​များ​၏ ​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ကို​နည်း​မျိုး​စုံ​ဖြင့် ​ချိုး​ဖောက်​လျက်​ရှိ​သည်။
၁) ​နောင်​ချို​မြို့​နယ် ​ထဲ​ရှိ ​ရွာ​သူ​ရွာ​သား​များ​ကို ​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့​စွာ ​သတ်​ဖြတ်​ခြင်း ​နှင့် ​အ​ကြောင်း​မဲ့​စွာ ​ဖမ်း​ဆီး​ခြင်း။
၂) ​သီ​ပေါ​မြို့ ​နယ် ​ထဲ​တွင် ​ရှမ်း​ပြည်​တိုး​တက်​ရေး​ပါ​တီ ​ရှမ်း​ပြည်​တပ်​မ​တော် SSPP/SSA ​ကို ​ထိုး​စစ်​ဆင်​ပြီး​နောက်​ပိုင်း​ရွာ​သား ၂,၀၀၀ ​ကျော် ​စစ်​ဘေး​ရှောင်​နေ​ချိန် ​အ​တွင်း ​ရွာ​သား​၏ ​ပ​စ္စည်း​များ​လု​ယှက် ​ခြင်း။
၃) ​မိုင်း​ရှူး ​စစ်​ဆေး​ရေး​ဂိတ်​တွင် ​ဆိုင်​ကယ်​မောင်း​နှင်​လာ​သော ​လယ်​သ​မား​တစ်​ဦး​ကို ​ရပ်​ခိုင်း​ရာ ​မ​ရပ်​ပေး​သ​ဖြင့် ​သေ​နတ်​ဖြင့်​ပစ်​သတ်​ခြင်း။
​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​သည် SSPP/SSA ​နှင့် ​နောင်​ချို​မြို့​တွင် ​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​နေ​ချိန်​အ​တွင်း ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​က ​ရွာ​သား​များ​ကို ​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့​စွာ ​သတ်​ဖြတ်​ခြင်း​နှင့် ​ဖမ်း​ဆီး​ခြင်း​ပြု​လုပ်​နေ​သည်။
​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​သည် ​ရှမ်း​ပြည်​တိုး​တက်​ရေး​ပါ​တီ ​ရှမ်း​ပြည်​တပ်​မ​တော် SSPP/SSA ​နှင့် ​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​မြောက်​ပိုင်း​တွင် ​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​နေ​ချိန်​အ​တွင်း ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​က ​အောက်​တို​ဘာ ​လ ၁၀ ​ရက်​နေ့ ၂၀၁၆ ​တွင် ​အ​သက် ၂၇ ​နှစ်​အ​ရွယ်​ရှိ​သည့် ​ရွာ​သား​တစ်​ယောက်​ကို ​သတ်​ဖြတ်​ခြင်း​နှင့် ​အောက်​တို​ဘာ ​လ ၂၀ ​ရက်​နေ့​တွင် ​အ​သက် ၅၂ ​အ​ရွယ်​ရှိ​သည့် ​ရွာ​သား​တစ်​ယောက်​ကို ​ဖမ်း​ဆီး​သွား ​ခဲ့​သည်။
အောက်​တို​ဘာ​လ ၁၀ ​ရက်​နေ့ ​မွန်း​လွဲ​ပိုင်း ၁း ၃၀ ​မိ​နစ်​ချိန်​တွင် ​ဒေ​သ​ခံ ​ရွာ​သား ၈ ​ယောက် (SSPP/SSA ​အ​တွက် ​အ​ချိန်​ပိုင်း​အ​လုပ်​လုပ်​ပေး ​သော်​လည်း ​စစ်​သား​မ​ဟုတ် ) ​ဆ​မ္မ​ဆယ်​ရွာ​မှ ​နောင်​ချို​၏ ​တောင်​ဘက် ၁၅ ​ကီ​လို​မီ​တာ​အ​ကွာ​တွင် ​ကား​စီး​လာ​ရာ ​ခ​မ​ရ ၁၁၄ ​နှင့် ၁၁၅ ​မှ ​အင်​အား ၄၀ ​ခန့်​က ​သူ​တို့​ကို ​လက်​နက်​ကြီး​ငယ်​ဖြင့်​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​သည်။ ​ရွာ​သား​များ​ကား​ရပ်​ပြီး​ထွက်​ပြေး ​သော်​လည်း ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား​များ​က ​သူ​တို့​ဆက်​လိုက်​နေ​သည်။ ​သူ​တို့ ​ဝမ်​ကောင်း​နှင့် ​လွိုင်​ကွန် ​ရွာ​ဘက်​သို့ ​ဖြတ်​ပြေး ​သွား​ချိန်​တွင် ​အ​စိုး​ရ​တပ်​သား​များ​က ​ထို​ရွာ​ထဲ​ကို ​လက်​နက်​များ​ဖြင့် ​ပစ်​ခတ်​ရာ ​ဝမ်​ကောင်း​ထဲ​ရှိ ​ရွာ​သား​များ​၏​အိမ်​များ ​ကျဉ်​ဆံ ​ထိ​မှန် ​ပျက်​ဆီး​သွား​သည်။ ​
​ ကား​မှ ​ရွာ​သား ၆ ​ယောက်​ထွက်​ပြေး​သိမ်း​ရှောင်​နိုင်​သော်​လည်း ​ဝမ်​လန်​နွမ်​ရွာ​သား ​စိုင်း​ရွှေ ​အ​သက် ၂၇ ​နှစ်​မှာ ​လွိုင်​ကောင်​ကျေး​ရွာ​အ​ပြင်​ဘက် ​တွင် ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​၏ ​ပစ်​သတ်​ခြင်း​ခံ​ခဲ့​ရ​သည်။ ​ဒေ​သ​ခံ​ရွာ​သူ​ရွာ​သား​များ​က ​ထို​ည​နေ​ခင်း​တွင် ​ကျည်​ဆံ​ဒဏ်​ရာ​များ​နှင့် ​အ​တူ ​သူ့​အ​လောင်း ​ကို​တွေ့​ရှိ​ခဲ့​သည်။ ​ဝမ်​လန်​နွမ် ​ရွာ​၏​နောက်​ထပ်​ရွာ​သား​တစ်​ဦး​ဖြစ်​သော ​အ​သက် ၁၈ ​နှစ်​အ​ရွယ် ​ရှိ​သည့်​စိုင်း​စော ​သည်​လည်း​အ​ဖမ်း ​ခံ​ရ​သည်​ဟု ​ယုံ​ကြည်​ရ ​သော်​လည်း ​သူ့​ကို​ဘယ်​သို့​ဖမ်း​ဆီး​ခေါ်​ဆောင်​သွား ​သည်​ကို​မ​သိိ​ရှိ ​ကြ​ပေ။
​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​နှင့်​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​ပွား​ချိန်​တွင် ​စစ်​ဘေး​ရှောင်​သည့်​ရွာ​သား ​အ​ယောက် ၅၀ ​ခန့် ​တို့​သည် ​ထို​ဧ​ရိ​ယာ ​အ​နီး​နား​တစ်​ဝိုက်​ရှိ​ရွာ​နှင့် ​နောင်​ချို​မြို့​ထဲ​၌( ၃ ) ​ရက်​ခို​လှုံ​ခဲ့​ပြီး​နောက် ​နေ​ရပ်​သို့​ပြန်​လည်​ထွက်​ခွာ ​ခဲ့​ကြ​သည်။
​အောက်​တို​ဘာ ​လ ၂၀ ​ရက်​နေ့​တွင် ​အ​သက် ၅၂ ​အ​ရွယ်​ရှိ ​ဆ​မ္မ​ဆယ် ​ရွာ​သား​တစ်​ဦး​ကို​အေ ာက်​တို​ဘာ​လ ၁၀ ​ရက်​နေ့ ​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​ပွား​ခဲ့​သော​နေ​ရာ ​ရှိ ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​တပ်​သား​တို့​က ​သူ့​ကို ​ရှမ်း​လက်​နက်​ကိုင်​အ​ဖွဲ့ ​အ​တွက် ​ဆက်​ကြေး​ကောက်​ပေး​နေ​သည်​ဟု ​စွပ်​စွဲ​ခါ ​ဖမ်း​ဆီး​ခေါ်​ဆောင် ​သွား​သည်။
​အောက်​တို​ဘာ ​လ ၁၉ ​ရက်​နေ့​တွင် ​လယ်​သ​မား​လုင်း​ရွှေ​ခမ်း​သည် ​သည်း​ခြေ​တွင်​ကျောက်​တည် ​နေ​ခြင်း​ကို ​မ​န္တ​လေး​ဆေး​ရုံ​တွင် ​ကု​သ​ရာ​မှ ​အိမ်​သို့​ပြန်​လာ​သည်။​ထို​ည​နက်​တ​ခေါင်​ယံ ၂း၃၀ ​မိ​နှစ်​တွင် ​စစ် ​ကား​နှစ်​စီး​ဖြင့် ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​ခ​လ​ရ ၁၁၄ ​နှင့် ၁၁၅ ​မှ ​စစ်​သား​များ ​လုံး​ရွှေ​ခမ်း ​၏ ​အိမ်​သို့ ​ရောက်​လာ​သည်။ ​အင်​အား ၄၀ ​ကျော်​ရှိ​သည့် ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား​များ​သည် ​သူ​အိမ်​ကို ​ဝန်း​ထား​ပြီး ​အိမ်​တံ​ခါး​နှင့် ​ပြ​တင်း​ပေါက်​ကို ​ဖျက်​ဆီး​ရာ ​အိမ်​တံ​ခါး​ပေါက် ​နှစ်​ပေါက်​ပျက်​ဆီး​သွား​သည်။
​လုင်း​ရွှေ​ခမ်း ​သည် ​အိပ်​ယာ​မှ​ထ​ပြီးု​တံ​ခါး​ကို ​ဖွင့်​ပေး​ရာ ​စစ်​သား​များ ​လုင်း​ရွှေ​ခမ်း​၏ ​အိမ်​ထဲ​သို့​ဝင်​လာ​ပြီး ​သူ​ကို​လာ​ဖမ်း​သည်​ဟု​ဆို​သည်။ “ ​ရှမ်း​လက်​နက်​ကိုင် ​ကို​ဆက်​ကြေး​ကောက်​ပေး​တဲ့ ​လုင်း​ထွန်း​နဲ့ ​အ​ဆက်​အ​သွယ်​ရှိ​တယ်​ဆို​တာ ​ဟုတ်​တယ်​မ​ဟုတ်​လား? ​နင်​သူ​နဲ့ ​အ​ဆက်​သွယ်​ရှိ​တယ်​ဆို​တဲ့​စာ ​ငါ​တို့​လက်​ခံ​ရ​ထား​တယ် ”
​လုင်း​ရွှေ​ခမ်း​သည် ​သူ့​ကို​လာ​ရောက်​ဖမ်း​ဆီး​သော​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား​များ​ကို “​ကျွန်​တော် ​လယ်​သ​မား​တစ်​ယောက် ​ပါ ​ရှမ်း​စစ်​သား​တွေ​အ​တွက် ​ဆက်​ကြေး​မ​ကောက်​ခဲ့​ဖူး​ပါ ”​ဟု​ပြော​သော်​ဂ​ရု​မ​စိုက်​ဘဲဲ ​ဖမ်း​ဆီး​သွား​သည်။ ​ထို​အ​ချိန် ​အိမ်​ထဲ​တွင် ​လုင်း​ရွှေ​ခမ်း​၏ ​မိန်း​မ ​ပါ​နန်း​ငွေ ​အ​သက် ၄၆ ​နှစ်​ကို ​ထိုင်​ခိုင်း​ထား ​သည်။​သူ​၏ ​သား​သ​မီး ၃ ​ယောက်​မှာ ​မ​န္တ​လေး​မြို့​သို့ ​ပ​ညာ​သင်​ယူ​ရန် ​ပို့​ဆောင်​ထား​သည်။
​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​သည် ​သူ့​အိမ်​တစ်​ဝိုက်​ကို ​မ​နက် ၄း၅၀ ​မိ​နစ် ​ထိ ​ရှာ​ဖွေ​ကာ ​ဆ​မ္မ​ဆယ်​ကျေး​ရွာ​အုပ် ​စု​ဥ​က္က​ဌ ​ဦး​စိန်​လွန်​ရောက် ​လာ​ပြီး ​သူ​အိမ်​ထဲ​တွင် ​ဘာ​ပ​စ္စည်း​မှ ​မ​ယူ​သွား​ကြောင်း​လက်​မှတ်​ရေး​ထိုး​ခိုင်း​သည်။ ​ထို့​နောက် ​မ​နက် ၅ ​နာ​ရီ ​အ​ချိန်​တွင် ​လုင်း​ရွှေ​ခမ်း​ကို ​သူ​တို့​နှင့်​အ​တူ ​ခေါ်​ဆောင်​သွား​သည်။ ​ဘယ်​ကို​ခေါ်​သွား​သည်​ဆို​တာ ​သူ့​မိန်း​မ​အား ​မ​ပြော​ချေ။
​အောက်​တို​ဘာ​လ ၂၂ ​ရက်​နေ့​တွင် ​လုင်း​ရွှေ​ခမ်း​၏ ​ခဲ​အို ​လုင်း​ကျော်​စိုး​နှင့် ​ရှမ်း​တိုင်း​ရင်း​သား​များ ​ဒီ​မို​က​ရက်​တစ် ​ပါ​တီ ​၏​အ​မတ် ​စိုင်း​ဖူး​အောင် ​တို့​သည် ​နောင်​ချို​တွင်​အ​ခြေ​စိုက်​ထား​သော ​ခ​လ​ရ ၁၁၄ ​ထံ​သို့​သွား​ပြီး ​လုင်း​ရွှေ​ခမ်း​ကို​တွေ့​ရန်​တောင်း​ဆို​ခဲ့​သည်။ ​သူ​တပ်​ထဲ​ရှိ​သည်​ဟု ​အ​ကြောင်း​ကြား​သော်​လည်း ​တွေ့​ခွင့်​မ​ပြု​ခဲ့​ပေ။
​အ​စိုး​ရ​သည်​လက်​ရှိ​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ဖော်​ဆောင်​မှု​ထဲ​တွင် ​ပါ​ဝင်​လုပ်​ဆောင်​နေ​သော်​လည်း ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​သည် ​ပြည်​သူ​လူ​ထု​များ ​ကို SSPP/SSA ​နှင့် ​ဆက်​သွယ်​သည်​ဟု ​အ​ကြောင်း​ပြ​ပြီး ​ပြည်​သူ​လူ​ထု​များ​ကို ​ညှင်း​ပန်း​နှိပ်​စက်​မှု ​ဆက်​တိုက်​ပြု​လုပ်​နေ​သည်။ ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​နှင့် ​အ​ပစ်​ခတ်​ရပ်​စဲ​ရေး​လက်​မှတ်​ရေး ​ထိုး​ထား​သော SSPP/SSA ​ကို ​ထိုး​စစ်​ဆင်​ပြု​နေ ​သည့်​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​ကို ​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မ​ဏ္ဏိုင် ​သည်​လွန်​စွာ​စိုး​ရိမ်​နေ​ပါ​သည်။
​ အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​မှ ​ဖမ်း​ဆီး​ခေါ်​ဆောင်​သွား​သော ​စိုင်း​စော ​နှင့် ​လုင်း​ရွှေ​ခမ်း​ကို ​ချက်​ချင်း​ပြန်​လည်​လွတ်​ပေး ​ရန် ​နှင့် ​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့ ​သတ်​ဖြတ်​ခံ​ခဲ့​ရ​သော ​စိုင်း​ရွှေ ​အ​တွက် ​တာ​ဝန်​ယူ​ဖြေ​ရှင်း​ရန် ​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မ​ဏ္ဏိုင်​မှ ​တိုက်​တွန်း​လိုက်​ပါ​သည်။
၂. ​သီ​ပေါ ​မြို့​နယ် ​ထဲ ​တွင် SSPP/SSA ​နှင့် ​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​ပွား​ရာ ​ရွာ​ဒေ​သ​ခံ ၂,၀၀၀ ​ကျော် ​စစ်​ဘေး​ရှောင်​နေ​ချိန် ​အ​စိုး​ရတပ်​မ​တော်​က ​ရွာ​သူ​ရွာ​သား​ပ​စ္စည်း​များ​လု​ယူ​ဖျက်​ဆီး​ခြင်း
၂၀၁၆​ခု​အောက်​တို​ဘာ​လ ၂၃​ရက် ​နေ့ ​တွင် ​နမ့်​ပေါင်​အ​ခြေ​စိုက် ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​ခ​လ​ရ ၁၄၇ ​နှင့် ​ခ​လ​ရ ၂၉၁ ​သည် ​နား​ကွန်​ရွာ ( ​သီ​ပေါ​တောင်​ဘက် ၁၀ ​မိုင်​အ​ကွာ ) ​အ​နီး​ရှိ SSPP/SSA ​နှင့်​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​ပွား​ရာ ​ရွာ ( ၇ ) ​ရွာ​မှ ​ဒေ​သ​ခံ ​ရွာ​သူ​ရွာ​သား​ပေါင်း ၂,၀၀၀ ​ကျော် ​သည် ​သီ​ပေါ​မြို့ ​နှင့် ​နီး​စပ်​ရာ​ရွာ​သို့​ထွက်​ပြေး​သိမ်း​ရှောင်​ခဲ့ ​ကြ​သည်။ ​အ​စိုး​ရ​တပ် ​မ​တော်​က ​နား​လော့ ​ရွာ​ထဲ​ရှိ ​ရွာ​သား​ပိုင်​ပ​စ္စည်း​များ​ကို ​လု​ယက်​ဖျက်​ဆီး ​ခဲ့​သည်။ ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​မှ ​လု​ယက်​ဖျက်​ဆီး​နေ​ချိန်​တွင် ​ရွာ​နီး​နား​တွင် ​ထွက်​ပြေး​ပုန်း​ရှောင်​နေ​သော ​ရွာ​သား​တစ် ​ဦး​မှ ​မျက်​မြင်​သက်​သေ ​တွေ့​ခဲ့​ရ​သည်။
မ​နက်​ပိုင်း ၇ ​နာ​ရီ ​အ​ချိန်​တွင် ​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​ရာ ​တစ်​နာ​ရီ်​ကြာ​မြင့်​ပါ​သည်။ ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​ကို ​ကြောက်​ရွံ​သ​ဖြင့်​နား​လော့၊ ​စေ့​ခန်၊ ​နမ့်​ဖတ်၊ ​နမ့်​ခဲဝ်၊ ​နမ့်​ဟုတ်၊ ​ဝမ်​ခိုင်း၊ ​ဝမ်​ခူး ​အ​စ​ရှိ​သည့်​ရွာ​များ​သည် ​နီး​စပ်​ရာ ​ဘုန်း​တော်​ကြီး​ကျောင်း​တွင် ​တစ်​ပတ်​ကြာ ​စစ်​ဘေး​ရှောင်​ခဲ့​ရ​သည်။
​နား​လော့​ကျေး​ရွာ​မှ ​ပ​စ္စည်း​ခိုး​ယူ​လု​ယက်​ခံ​ရ​သော ​နာ​မည်​စ​ရင်း​များ
​​စဉ် ​​ရွာ​သူ/ ​ရွာ​သား​အ​မည် ​လု​ယက်​ခံ​ရ​သော​ပ​စ္စည်း​များ
၁. ​​လုင်း​ဆိုင် + ​ပါ​အေး ​အိမ်​သုံး​ပ​စ္စည်း​များ​နှင့် ( ​ငွေ​သား ၁၅၀,၀၀၀ ​ကျပ် ​ပျောက်​ဆုံး)
၂. ​​လုင်း​ဆာ + ​ပါ​မြင့် ​လက်​စွပ်​တစ်​ကွင်း​နှင့်​ဆွဲ​ကြိုး​တစ်​ကုံး
၃. ​​လုင်း​ပန်း ​ဘု​ရား​ရုပ်​ထု
၄. ​​လုင်း​ထွန်း + ​ပါ​မြင့် ​ဘု​ရား​ရုပ်​ထု
၅. ​လုင်း​ဥ​တ္တ​မ ​ရွှေ​ဆွဲ​ကြိုး​နှင့် ​လက်​စွပ်​တစ်​ကွင်း
၆. ​​လုင်း​ထွန်း​အောင် ​ဓား​နှစ်​ချောင်း
၇. ​​လုင်း​ပီး​ရင် ​​အိမ်​သုံး​ပ​စ္စည်း​များ
၈. ​​လုင်း​န​န္ဒာ ​အိမ်​သုံး​ပ​စ္စည်း​များ
၉. ​​ပါ​ပေါက် ​အိမ်​သုံး​ပ​စ္စည်း​များ
၁၀. ​​လုင်း​ဆိုင်​ယွမ် ​အိမ်​သုံး​ပ​စ္စည်း​များ
၁၁. ​ပီ​ဆာ ​အိမ်​သုံး​ပ​စ္စည်း​များ
၁၂. ​​ပါ​ဆို့ ​အိမ်​သုံး​ပ​စ္စည်း​များ
၁၃. ​​နိုင်း​ဆာ ​အိမ်​သုံး​ပ​စ္စည်း​များ
၁၄. ​​လုင်း​ဥ​တ္တ​မ ​အိမ်​သုံး​ပ​စ္စည်း​များ
အောက်​တို​ဘာ ​လ ၂၃-၂၄, ၂၀၁၆ ​သီ​ပေါ​မြို့​တွင်​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​ရာ ​စစ်​ဘေး​ရှောင်​သူ​များ​၏ ​စား​ရင်း
၂၄ ​ရက်​နေ့ ​အောက်​တို​ဘာ​လ ၂၀၁၆ ​တွင် ​စစ်​ရှောင်​ခို​လှုံ​ခဲ့​သော​ရွာ​သား​များ​၏ ​တည်း​ခို​ခဲ့​သော ​ဘုန်း​တော်​ကြီး​ကျောင်း​အ​သီး​သီး​များ​ကို ​အောက်​ပါ​အ​တိုင်း​ဖြစ်​သည်။
​​စဉ်။ ​​စစ်​ရှောင်​များ​ခို​လှုံ​ခဲ့​ရာ​နေ​ရာ ​ရွာ​အ​မည် ​အ​ရေ​အ​တွက်
၅၁၃ ​သော​ရွာ​သူ​ရွာ​သား ​တို့​မှာ ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း ​သို့​သွား​ရောက်​ခို​လှုံ​ခဲ့​ကြ​ပြီး ​ကျန် ​အ​ယောက် ၁၀၀ ​သည်​ရွာ​ထဲ​မှာ​တင်​ကျန်​ရစ်
​ နမ့်​ခဲဝ်​ရွာ ၁၀၉
​ ​ဝမ်​ခိုင်း​ရွာ ၂၂
​ ​ဝမ်​ခူး​ရွာ ၂၆
​ ​စု​စု​ပေါင်း ၅၁၃
၂။ ​​နောင်​ဝမ်း​ဘုန်း​တော်​ကြီး​ကျောင်း ​ဖော်​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ​ပါ ၁၆၇
၃။ ​​ဆီ​ထောက်​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း ဖော်​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ​ပါ ၁၅၀
၄။ ​​ဆောင်​ကြဲ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း ဖော်​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ​ပါ ၃၅၀
၅။ ​နား​မောက်​ကော်​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း ဖော်​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ​ပါ ၁၂၀
၆။ ​ဆိုင်​လေ ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း ဖော်​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ​ပါ ၁၆၅
၇။ နောင်​ပူး​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း ဖော်​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ​ပါ ၆၈
နမ့်​လန် ဖော်​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ​ပါ ၁၂၈
နား​လေ​ဆိုက်​ခေါင်​ဘုန်း​ကြီး ​ကျောင်း ဖော်​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ​ပါ ၁၀၅
​​စု​စု​ပေါင်း​စစ်​ရှောင် ​ဒု​က္ခ​သည် ၂၁၃၀
၃။ ​အ​စိုး​ရ ​စစ်​တပ်​၏ ​စစ်​ဆေး​ရေး​ဂိတ် ​တွင် ​ဆိုင်​ကယ်​ဖြတ်​မောင်း​လာ​သော​လယ်​သ​မား ​တစ်​ဦး​ကို ​အ​စိုး​ရ ​တပ်​မ​တော်​မှ ​သေ​နတ်​ဖြင့်​ပစ်​သတ်
​အောက်​တို​ဘာ​လ ၂၆ ​ရက်​နေ့ ၂၀၁၆ ​တွင် ​အ​သက် ၄၀ ​ရှိ ​လယ်​သ​မား​တစ်​ဦး​သည် ​ဆိုင်​ကယ်​နှင့် ​အ​စိုး​ရ​တပ်​များ ​စစ်​ဆေး​ရာ ​ဂိတ်​သို့​မောင်း​နှင် ​ဖြတ်​သွား​ချိန်​တွင် ​အ​စိုး​ရ​တပ်​သား​သည် ​သူ့​ကို ​သေ​နတ်​ဖြင့် ​ပစ်​သတ်​ခဲ့​သည်။
​လယ်​သ​မား​တစ်​ဦး​ဖြစ်​သော ​လုင်း​ဆု ​သည်​သူ့​သား​နှင့်​အ​တူ ​မိုင်း​ရှူး​မြို့​နယ် ​ပန်​ကျွဲ ​ကျေး​ရွာ​အုပ်​စု ​ဝမ်​ခို​စုမ် ​က​နေ ​မိုင်း​ရှူး​မြို့ ​ထဲ​သို့ ​ပြင်​ထား​သော​ဆိုင်​ကယ်​တစ်​စီး​ကို ​သွား​ယူ​ရန် ​အောက်​တို​ဘာ ၂၃ ​ရက်​နေ့​တွင် ​ဆိုင်​ကယ်​ဖြင့် ​သွား​ခဲ့​သည်။
​ မြို့​အ​ဝင် ​လမ်း​တစ်​လျောက်​တွင် ​မိုင်း​ရှူး​မြို့​နယ် ​ရပ်​ကွက် ၄ ​က ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​၏ ​စစ်​ဆေး​ရေး​ဂိတ်​မှာ ​စစ်​သား ၁၀ ​ယောက်​လောက်​ရှိ​သည်။ ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​၏ ​စစ်​ဆေး​ရေး​ဂိတ် ​ကို ​ခ​လ​ရ ၁၄၉ ​မှ ​တစ်​လ ​နီး​ပါး ​တည်​ဆောက်​ထား ​ပေ​မဲ့ ​သူ​တို့​အ​မြဲ​တမ်း ​မ​ရှိ​ပါ။ ​ကိုက် ၁၀၀ ​ခန့်​တွင် ​နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ ​တည်​ရှိ ​လျက်​ရှိ​သော ​ရဲ​စ​ခန်း​ဂိတ် ​ကို ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​က ​သူ​တို့​ဂိတ်​အ​ဖြစ်​အ​သုံး​ပြု​လိုက်​သည်။ ​ထို​ဂိတ်​တွင် ​ရဲ​များ​က ​ကား​အ​ဝင်​အ​ထွက် ​ကို​တား​ပြီး ​လမ်း​ပြင်​ဖို့​အ​တွက် ​အ​ခွန်​ကောက်​လေ့​ရှိ​သည်​ဟု​ဆို​သည်။ ​ထို​နေ့​မ​နက်​တွင် ​လုင်း​ဆု ​နှင့် ​အ​တူ ​သူ့​သား ​က ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ် ​စစ်​ဆေး​ရေး​ဂိတ် ( ​သို့​မ​ဟုတ် ) ​ရဲ​စ​ခန်း​ဂိတ်​က ​မ​တား​သ​ဖြင့် ​ဆက် ​သွား​ခဲ့​သည်။
​ဆိုင်​မှ ​ပြင်​ထား​သော​ဆိုင်​ကယ်​သွား​ယူ​လာ​ပြီး​နောက် ​လုင်း​ဆု ​က ​သူ့​သား​ကို ​စား​စ​ရာ ​သွား​ဝယ်​ဖို့ ​ပိုက်​ဆံ​ပေး​လိုက်​သည်။​သူ​က ​ပြင်​ပြီး​သွား​သော ​ဆိုင်​ကယ်​နှင့် ​အ​တူ​အိမ်​သို့​ဦး​တည်​ရာ​မောင်း​လာ ​သည်။
​ မ​နက် ၁၀း၃၀ ​မိ​နစ်​အ​ချိန်​တွင် ​လုင်း​ဆု ​သည် ​သူ​ဆိုင်​ကယ်​ကို ​မောင်​ပြီး ​ရပ်​ကွက် ( ၄ ) ​မှာ ​ရှိ​သည့် ​ရဲ​စ​ခန်း​ဂိတ် ​ဘက်​သို့​ဦး​တည်​သွား​ရာ ​သူ့​ရှေ့​တွင် ​ရွာ​သား​နှစ်​ယောက်​ဖြတ်​သွား​တာ ​ရပ်​စ​ရာ​မ​လို​ဘဲ​ဖြတ်​သွား ​သည်​ကို ​တွေ့​တော့ ​သူ​လည်း​ရပ်​ပေး​စ​ရာ​မ​လို​ဘူး​ထင်​ပြီး​ဖြတ်​သွား​ချိန်​တွင် ​ရဲ ​က ​လုင်း​ဆု​ကို​ရပ်​ခိုင်း​လိုက်​သည်။ ​သို့​သော် ​လုင်း​ဆု​က ​မ​ရပ်​ပေး​ဘဲ ​ဂိတ်​ကို​ဆက်​ဖြတ်​သွား​ပြီး ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ် ​ဂိတ်​ပါ​မ​ရပ်​ပေး​ဘဲ​ဖြတ်​သွား​သည်။
​အ​စိုး​ရ ​စစ်​တပ်​၏ ​ဂိတ် ​နှင့် ​ကိုက်၃၀ ​လောက် ​ဝေး​သွား ​ချိန်​တွင် ​အ​စိုး​ရ ​တပ်​သား​က ​လုင်း​ဆု​ကို ​ဂိတ်​က​နေ ​သေ​နတ်​ဖြင့်​ပစ်​သတ်​သည်​ဟု ​မျက်​မြင် ​တစ်​ယောက်​က ​ပြော​ပြ​သည်။ ​ထို​ကျည်​ဆံ​သည် ​သူ့​၏ ​ဂုတ်​ကို ​ဖြတ်​ပြီး ​ညာ​ဘက်​နား​ထင် ​နှင့် ​မျက်​လုံး​ကို ​ထိ​မှန်​ရာ ​ထို​နေ​ရာ​တွင် ​ချက်​ချင်း​သေ​ဆုံး​သွား​သည်။
သေ​နတ်​ပစ်​သံ​ကြား​သ​ဖြင့် ​အ​နီး​ရှိ​ရွာ​သား​များ​က ​ဘာ​ဖြစ်​တာ​လဲ​ဟု ​ဂိတ်​တွင် ​ရောက်​လာ​ပြီး​ကြည့်​ရှု​သည်။ ​ရဲ​များ ​က​သူ​တို့​ကို​တား​ဆီး​ထား​သည်။ ​ရဲ​များ​က ​ဆိုင်​ကယ်​မောင်း​သူ​တ​ယောက်​ကို ​စစ်​တပ် ​က ​သေ​နတ်​ဖြင့်​ပစ်​သည် ​ဟု ​ဆို​သည်။ ​ဘယ်​လို​ဖြစ်​တာ​လဲ​ဟု​မေး​သော​အ​ခါ ​သူ​တို့​က “​ကျ​နော်​တို့​သူ့​ကို ​ဆိုင်​ကယ်​ရပ်​ခိုင်း​တယ်၊ ​ဒါ​ပေ​မဲ့​သူ​မ​ရပ်​ပေး​ဘူး။ ​စစ်​သား​တွေ​က ​သူ့​ကို ​ရပ်​ခိုင်း​တယ်၊ ​သူ့​ကို ​သတ်​ရန် ​မ​ရည်​ရွယ်​ပါ။ ​သေ​နတ်​ကို​လေ​ထဲ​ပစ်​လိုက်​တာ​ဘဲ​ရှိ​တာ” ​ဟု​ပြော​သည်။​
​မ​နက် ၁၁ ​နာ​ရီ​အ​ချိန်​တွင် ​လုင်း​ဆု​၏ ​သား ​အ​စား​အ​စာ ​များ​ဝယ်​ခဲ့​ပြီး ​အိမ်​အ​ပြန်​လမ်း ​တွင် ​စစ်​တပ် ​၏ ​စစ်​ဆေး​ရေး​ဂိတ်​ဆီ​ရောက်​လာ​သည်။ ​ဂိတ်​မှာ ​စစ်​သား​များ​နှင့် ​ထ​ရပ် ​နှစ်​စီး​ကို ​တွေ့​ခဲ့​သည့် ​အ​ပြင် ​ပ​လပ်​စ​တစ်​ဖြင့် ​ဖုံး​ထား​သော​ထိ​ခိုက် ​ဒဏ်​ရာ​ရ ​သူ​တစ်​ဦး​ကို ​လမ်း​ဘေး​မှာ​လဲ ​လျှောင်း​နေ​သည်​ကို ​တွေ့​ရ ​သည်။ ​သူ့ ​ဖ​အေ ​၏ ​ဝတ်​ထား​သော ​ဘောင်း​ဘီ​ကို ​တွေ့​မြင် ​မှတ်​မိ​ရာ ​သူ့​အ​ဖေ ​သေ​နတ်​ဖြင့် ​ပစ်​သတ်​ခံ​ရ ​သည်​ဟု ​သိ​လိုက်​သည်။ ​သူ​အိမ်​သို့​မြန်​မြန်​မောင်း​ပြီး ​ခြံ​ထဲ​တွင် ​ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက် ​စိုက်​နေ​သော ​သူ့​အ​မေ​ကို ​သွား​ခေါ်​ပြီး​သူ​နှင့် ​အ​တူ​မြို့​ထဲ​သို့ ​ပြန်​လာ​ရာ ​ထို​ချိန်​တွင် ​သူ့​အ​လောင်း​ကို ​ထ​ရပ်​ကား​ဖြင့် ​မိုင်း​ရှူး​ဆေး​ရုံ​သို့ ​ပြောင်း​ရွေ့​နေ​ပြီ​ဖြစ်​သည်။
​ကား​နှစ်​စီး​နှင့် ​ရဲ ​နှင့်​တပ်​သား​များ​သည် ​ကား​စီး​ပြီး​ဆေး​ရုံ​သို့​သွား​ကာ ​လုင်း​ဆု ​၏ ​ခေါင်း​ကို ​ခွဲ​စိပ်​နေ​သည့် ​သူ​နာ​ပြု​ဆ​ရာ​မ ​ဆီ​သို့ ​သွား​ပြီး ​အ​အေး​ခန်း​ထဲ​တွင်​အ​လောင်း​ကို ​ထည့်​ပြီး ​သော့​ခတ်​ခိုင်း​လိုက်​သည်။
​မွန်း​လွဲ​ပိုင်း ၁း၃၀ ​အ​ချိန်​လောက်​တွင် ​နှစ်​ဆယ်​လောက်​ရှိ​သော​လုင်း​ဆု​၏ ​ဆွေ​မျိုး​များ ​ခို​ဆုမ် ​ရွာ​က​နေ ​ဆေး​ရုံ​သို့​ရောက်​လာ ​ပေ​မဲ့ ​အ​အေး​ခန်း​တွင် ​သော့​ခတ်​ထား​သော​ကြောင့် ​အ​လောင်း​ကို ​သူ​တို့​မ​တွေ့​ရ​ပေ။ ​မ​ကြာ​မီ ​ရဲ​ငါး​ယောက် ​လာ​ရောက်​ပြီး ​ထို​အ​လောင်း​ကို ​ချက်​ချင်း​မြှပ်​ဖို့​အ​မိန့်​ပေး​လိုက်​သည်။ ​လူ့​အ​လောင်း​ကို ​အ​ခေါင်း​ထဲ​မ​ထည့်​ဖို့​ပါ​ပြော​သည်။
`သို့​သော် ​လုင်း​ဆု ​၏ ​မိန်း​မ​ဖြစ်​သူ ​ပါ​အောင်​က ​ရဲ​ကို ​အ​ခေါင်း​မ​ပါ​ဘဲ​မြှပ်​ဖို့ ​မ​လုပ်​နိုင်​ဘူး​ဟု​ပြန်​ပြော​သည်။ ​သူ့​အ​လောင်း​ကို ​သုံး၊ ​လေး​ရက် ( ​သို့ ) ​တစ်​ပတ်​ထား​ပြီး ​ဘုန်း​ကြီး ​အ​ပါး​အ​နည်း​ငယ် ​ပင့်​ဖိတ်​ကာ ​သူ့​အ​တွက်​ဈာ​ပ​န ​အ​ခန်း​အ​နား​နှင့် ​အ​မျှ​ကု​သိုလ်​ဝေ​ပေး ​ရ​မည်​ဟု ​ရဲ​များ​ကို ​ပြော​သည်။ ​နောက်​ပိုင်း​တွင် ​အ​ခေါင်း​ထဲ​ထည့်​ရန် ​သူ​မိ​သား​စု​ကို ​ခွင့်​ပြု​လိုက်​သ​ဖြင့် ​သူ့​မိ​သား​စု​က ​မိုင်း​ရှူး​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​ရှိ ​ဘုန်း​ကြီး​သုံး​ပါး​ကို ​မိုင်း​ရှူး​ဆေး​ရုံ​သို့ ​ပင့်​ဆောင်​ပြီး ​ဈာ​ပ​န ​ကျင်း​ပ​ပြီး ​နောက်​တွင် ​မိုင်း​ရှူး​သင်္ချိုင်း ​တွင်​မြှပ်​နှံ​ထား​ခဲ့​သည်။
​သူ့​မိ​သား​စု​ပြော​ဆို​ချက်​အ​ရ ​လုင်း​ဆု ​အိမ်​က​နေ ​ငွေ​သား ၁၀ ​သိန်း​ကျပ် ​ယူ​ဆောင်​သွား ​ပြီး​ကျွဲ​နွား​ကုန်​သည် ​နှင့် ​တွေ့​ပါ​က ​ကျွဲ ​နှင့် ​နွား​ကို ​ဝယ်​ခဲ့​မည်​ဟု ​ပြော​ဆို​သွား​သည်။ ​လုင်း​ဆု​သည် ​ရွှေ​ရောင်​လက် ​ပတ်​နာ​ရီ​ကို ​ဝတ်​ဆင်​ထား​ပြီး ​သူ​နဲ့ ​အ​တူ​လက်​ကိုင်​ဖုန်း​လည်း​ယူ​သွား ​ပေ​မဲ့ ​သူ​အ​လောင်း ​ဆေး​ရုံ​ရောက်​တော့ ​ဆေး​ရုံ​က ​ဝန်​ထမ်း​များ​က ​သူ​ဆီ​မှာ ​ငွေ​သား ​တစ်​သိန်း​ရှစ်​သောင်း​ဘဲ​တွေ့​သည်​ဟု ​ဆို​သည်။
​သူ့​ဆိုင်​ကယ်​နှင့် ​လက်​ကိုင်​ဖုန်း ​ကို​ရဲ​စ​ခန်း​တွင် ​သိမ်း​ထား​သည်​ဟု ​ရဲ​က ​သူ့​မိ​သား​စု​များ​ကို ​အ​ကြောင်း​ကြား ​ကာ ​သူ့​ပ​စ္စည်း​ကို ​သူ့​မိ​သား​စု​ဝင် ​ထံ ​ပြန်​လည်​ပေး​အပ်​ခြင်း​မ​ရှိ​သေး​ဟု ​သိ​ရ​သည်။
​သေ​ဆုံး​သွား​သော​လုင်း​ဆု ​အ​တွက် ​သူ့​ဇ​နီး​ထံ ​လျော်​ကြေး​တစ်​စုံ​တစ်​ရာ​မှ ​ပေး​အပ်​ခြင်း​မ​ရှိ​ဟု​ဆို​သည်။ ​လုင်း​ဆု ​အ​တွက် ​အောက်​မေ့​ဖွယ်​ရာ ​အ​ခမ်း​အ​နား​ကို ​နို​ဝင်​ဘာ​လ ၁ ​ရက်​နေ့ ​နှင့် ၂ ​ရက်​နေ့ ၂၀၁၆ ​တွင် ​ကျင်း​ပ ​ပြု​လုပ်​ခဲ့​သည်။
​ လုင်း​ဆု​၏ ​ဇ​နီး​က “​ကျ​မ​ရဲ့​ယော​ကျာ်​ဟာ ​ဘာ​မှ ​လည်း​အ​မှား​မ​လုပ်​မိ​ဘူး။ ​ကျ​မ ​တို့ ​ကို ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​က​အ​ပစ်​မ​ရှိ​တဲ့ ​ရွာ​သား​များ​၏​လူ့​အ​ခွင့် ​အ​ရေး ​ကို​ချိုး​ဖောက်​ပြီး ​နှိပ်​စက်​သတ်​ဖြတ်​သည့် ​ကိ​စ္စ​ကို ​လူ​မှု ​အ​သိုင်း​အ​ဝိုင်း​မှာ ​ကျယ်​ကျယ်​ပြန့်​ပြန့်​သိ​စေ​ချင် ​တယ် ။​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​က ​ဒီ​လို ​အ​ပစ်​မဲ့​သတ် ​ဖြတ်​နေ​တာ ​ကို​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​ပြော​ရဲ​ဘူး​လေ ​ဘာ​ဖြစ်​လို့​လည်း​ဆို​တော့​ကျ​မ​တို့​နေ​တဲံ့​နေ​ရာ​ဟာ ​အ​နက်​ရောင်​နယ်​မြေ​ဖြစ်​နေ​လို့​ဘဲ။ ​လမ်း​ပြင်​နေ​တဲ့ ​အ​လုပ်​သ​မား​နဲ့​တ​ချို့​ရွာ​သား​တွေ ​ဘာ​ဖြစ်​ပွား​နေ​တယ် ​ဆို​တာ ​တွေ့​ပေ​မဲ့​လည်း ​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​ပြော​ရဲ​ဘူး​လေ။ ” ​ဟု ​ဆို​သည်။
​လုင်း​ဆု​သည် ​သူ့​ရွာ​၏​ရွာ​သူ​ကြီး​ဖြစ်​ခဲ့​ဖူး​သည်။ ​သူ​နှင့် ​အ​တူ ​သူ့​ဇ​နီး​နှင့် ​သား​နှင့်​သ​မီး​နှစ်​ယောက် ​ကျန်​ရစ်​သည်။ ​သူ့​သား​မှာ ​အ​သက် ၂၀ ​နှစ်​နှင့် ​သူ့​သ​မီး​အ​သက် ၁၈ ​နှစ်​တို့​ရှိ​ကြ​သည်။
​လွန်​ခဲ့​သည့် ​လ ​တွင် ​မိုင်း​ရှူး​မြို့​နယ်​တစ်​ဝိုက်​တွင် ​အ​စိုး​ရ ​တပ်​များ ​များ​သည်​ထက်​များ​လာ ​သည်။ ​ထို​ဒေ​သ​တစ်​ဝိုက်​တွင် SSPP/SSA ​တပ်​၏​နယ်​မြေ​ဖြစ်​သည်။
​ စစ်​သား​မ​ဟုတ်​သည့် ​အ​ပြစ်​မဲ့​ပြည်​သူ​ကို ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​က ​သေ​နတ်​ဖြင့် ​ပစ်​သတ်​ခြင်း၊ ​ရွာ​သူ​ရွာ​သား ​များ​အ​ပေါ် ​အ​စိုး​ရ ​တပ်​မ​တော်​၏ ​ဖိ​နှိပ်​ရက်​စက်​မှု ​နှင့် ​သေ​ဆုံး​သွား​သည့် ​လုင်း​ဆု ​၏ ​အ​လောင်း​ကို ​သူ့​မိ​သား​စု​မှ ​ချက်​ချင်း​မြေ​မြှပ်​ရန် ​ရဲ​မှ ​ခိုင်း​ခြင်း​ကို ​ကျွန်ုပ်​တို့ ​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မ​ဏ္ဍိုုင်​မှ ​ပြင်း​ထန်​စွာ​ကန့်​ကွက် ​သည်။ ​လုင်း​ဆု ​သေ​နတ်​ဖြင့် ​အ​ပစ်​သတ်​ခံ​ရ ​သည့်​ကိ​စ္စ​နှင့် ​ပတ်​သတ်​ပြီး ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​မှ ​တာ​ဝန်​ယူ​ဖြေ​ရှင်း​ရန်​နှင့် ​ဖြစ်​သွား​သည့် ​ကိ​စ္စ​ကို ​ပွင့်​လင်း​မြင်​သာ​စွာ​ဖြင့် ​စစ်​ဆေး​ရန် ​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ ​တောင်း​ဆို​လိုက်​ပါ​သည်။
​စိုင်း​ဟော်​ရှဲန် +၆၆(၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( English, Shan )
​နန်း​လွန့်​လှိုင်း +၆၆(၀) ၆၃-၈၃၈-၉၀၂၉ ( English, Burma )
Previous Article ရှမ်း​ပြည်​နယ်​မြောက်​ပိုင်း​မိုင်း​ရင်​ကျေး​ရွာ​အုပ်​စု​တွင် ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​က​လယ်​သ​မား၃​ဦး​ကို​ရိုက်​နက်၊ ​တစ်​ဦး​ကို​သေ​နတ်​ဖြင့်​ပစ်။
Next Article အ​ပြင်း​အ​ထန်​စစ်​ဖြစ်​နေ​သည့် ​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​မြောက်​ပိုင်း​တွင်​ရှိ ​အ​ထက်​ရဲ​ရွာ​ရေ​ကာ​တာ​ပြု​လုပ်​ခြင်း​ကို ​ပြန်​လည်​ရုပ်​သိမ်း​ရန်​တောင်​သူ​လယ်​သ​မား ​အ​ယောက် ၁၅၀၀ ​ဖြင့်​တောင်း​ဆို​ခြင်း။